Oniversiten’i Mahajanga: tsara fandray indrindra ny fankalazana ny andron’i Mandela | Région Boeny
11Fitokanana ny takela-bato fahatsiarovana manokana ho an’i Nelson Mandela, fanomezana solosaina miisa roa, vary gony iray, menaka amin’ny daba 20 litatra miisa 2, savony sy vovon- tsavony 3 baoritra avy ho an’ireo zaza sahirana tezaina ao amin’ny Akanin’ny zaza Kamboty ao Mangarivotra.
Ireo no hetsika nanamarihana ny fankalazana ny andro ho an’i Nelson Mandela na “Mandela Day” ny sabotsy 05 aogositra 2017 teny amin’ny oniversiten’i Mahajanga.
Ny oniversiten’i Mahajanga no namarana tanteraka ny fankalazana ny andro natokana ho an’io olo-manga afrikana io rehefa avy nahavita ny azy avokoa ireo oniversite manerana ny renivohi-paritany enina eto Madagasikara nanomboka ny 18 jolay lasa teo.
Tonga niaraka tamin’ny Pr Rasoazananera Marie Monique, Minisitry ny Fampianarana ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa, ny Masoivohon’i Afrika Atsimo miasa eto Madagasikara, Rtoa Mau Vuyelwa Dlomo. Notron’ny Talen-kabinetran’ny Faritra Boeny, Atoa Hemedy, izay nisolotena ny Lehiben’ny faritra, ny filohan’ny oniversiten’i Mahajanga, ary ireo mpampianatra sy mpianatra ao amin’ny oniversiten’i Mahajanga.
«Ny fanabeazana no fiadiana mahomby indrindra iadiana amin’ny fahantrana ». Io no teny napetrak’I Nelson Mandela ary novoizina nandritra ny fankalazana teto Mahajanga. “Isaky ny mandalo eto anoloan’ny takela-baton’I Nelson Mandela ianareo mpianatra dia tsarovy fa olon’ny filaminana sy fandriampahalemana izany lehilahy manandaza izany” hoy ny Ministry ny Fampianarana ambony.
Ankoatra izay, manolona ireo fitokonana sy fitsaram-bahoaka niseho teny amin’ny oniversiten’I Mahajanga volana vitsy lasa dia nanatra ny Ministra fa “tsy toeram-panomanana dahalo ny oniversite fa famolavolana olo-kendry sy manam-pahaizana hitondra afaka fotoana fohy”.
Nankasitraka manokana ny oniversiten’I Mahajanga kosa ny Ministra tamin’ny fandraisana mendrika indrindra nasehon’ireo mpikarakara, nomarihiny fa tao no tsara fandray indrindra ity andron’I Mandela ity tamin’ireo oniverssite enina.
Nisy fampatsiahivina fohy ny tantaran’I Mandela, izay nitolona nandritra ny 67 taona ho fitsimbinana ny sahirana, fanajana ny maha-olona ary ho an’ny fitovian-jo eo amin’ny mainty sy ny fotsy hoditra. Ny 18 jolay 1918 izy no teraka tany Mvezo, Afrika Atsimo ary maty ny 05 desambra 2013 tany Johannesbourg, Afrika Atsimo